Gbasara Anyị - Anshan Topticom Tele-communication Co., Ltd.
Azụmaahịa kacha mma na-amalite site na ezigbo onye mmekọ azụmahịa. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ onye gị na ya ga na - eme ọhụ maka ngwa anya na - enweta ihe eji achọ ihe, ọchụchọ gị agwụla.
Tọrọ ntọala na 2014, Topticom na-anọchi anya Nkwupụta Nkwupụta Elu, na nke a bụ ọhụụ anyị nke duziri ma duzie anyị kemgbe anyị tọrọ ntọala. Mgbe ihe karịrị afọ 5 'uto ngwa ngwa, anyị enyerela aka iwulite netwọkụ ọsọ ọsọ ma nwee ntụkwasị obi gburugburu ụwa site na ịnye transceiver dị elu ma nwee ntụkwasị obi.
Anyị na-enye ọtụtụ ihe ntụgharị OEM dakọtara transceiver, dịka 100G QSFP28 / CFPx, 25G SFP28, 10G SFP +, GPON ONU, OLT ect. Anyị na-elekwasị anya ma na-agbaso nzụlite teknụzụ ka anyị wee nye gị ngwaahịa kachasị ọhụrụ iji nyere gị aka mee ka ahịa gị dị ngwa na ngwaahịa dị iche iche.
Ngwa ọrụ dị elu nke Topticom na ọrụ dị mma na-enyere aka merie ohere iji soro ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa.
A na-arụpụta ngwaahịa niile Topticom dịka iwu nke ISO9001: 2000, UL, TUV, CE, FDA na RoHS iji debe 1abụrụ ọkwa ọkwa.
O nwere ike isiri ike ịpụ n'ahịa ahịa jupụtara na ndị na-enye ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu. Mana enwere ụfọdụ ihe ndị pụrụ iche na Topticom nke na-eme ka anyị dị iche na ndị na - ebute ngwaahịa ndị ọzọ.
1. Gbado anya na Ọrụ Ndị Ahịa Dị Elu
Na Topticom, a zụrụ ndị ọrụ niile n'ụzọ ziri ezi na omume kacha mma maka ịnyefe ọrụ ndị ahịa ụwa. Ebumnuche anyị ịmepụta ahụmịhe mara mma maka gị. Site na mbido mbụ gị site na nnyefe ikpeazụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, a ga-emeso gị dị ka Eze.
2. Mee ka mmekọrịta gị na ndị ahịa gị sie ike
A na-arụpụta transceivers optical optical dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị elu na 100% interoperatable gafee nyiwe OEM niile. Ngwaahịa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ga-enye gị obi ike mgbe gị na ndị ahịa gị na-arụkọ ọrụ ma nyere gị aka iwusi mmekọrịta ha na ha ike.
3. Unlimited Nkwado
Topticom ga-etinye oge, R&D na akụrụngwa iji kwado ihe niile ịchọrọ, ọbụlagodi tupu anyị amalite imekọ ihe ọnụ.
4. Na-eme ihe n'eziokwu banyere ngwaahịa na ọrụ anyị
Ga - ejide ụfọdụ ndị na - eweta gị ghaara gị ụgha wee kpatara gị nsogbu. Na Topticom, nke a agaghị eme. Ime ihe n'eziokwu abụghị naanị usoro kachasị mma anyị, mana iwu anyị bụ isi, anyị na-agwa gị oge niile banyere ngwaahịa na ọrụ anyị.